बाबुराम भट्टराईलाई रातोबत्ती, रवीन्द्रलाई ग्रिनसिग्ल ! | Tungoon
बाबुराम भट्टराईलाई रातोबत्ती, रवीन्द्रलाई ग्रिनसिग्ल !
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई र रवीन्द्र मिश्रका पार्टी अलग भएपनि यी दुवै नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै केही वर्षदेखि सक्रिय छन् । तीन तहको निर्वाचनको परिणाम र पार्टीप्रतिको आकर्षण खासै उत्साहजनक नदेखिए पनि भट्टराई र मिश्र वैकल्पिक राजनीतिक दल बनाउने अडानबाट टसको मस भएका छैनन् । उद्देश्य र लक्ष्य एउटै भएकाले धेरैलाई लाग्न सक्छ–यी दुई दलबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण छ । उनीहरुको भनाइजस्तै व्यवहारमा पनि नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गरिरहेका छन् ।
तर, सत्य अर्कै छ । नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने भन्दै दुवै दलले ढोल बजाइरहे पनि ऐन–मौकामा पुरानै दलको शैलीमा एकले अर्कोलाई गौंडो ढुकेर खुइल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बाबुरामको पछिल्लो ट्वीटलाई मान्न सकिन्छ ।
सार्वजनिकरुपमा बाबुरामले रवीन्द्रप्रति कुनै आक्षेप लगाएको सुन्नमा नआए पनि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हालै कटाक्ष गरेका छन् । रवीन्द्रले एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा व्यक्त गरेको विचारप्रति असहमति राख्दै बाबुरामले ट्वीट गरेका हुन् । राजा महेन्द्रको समर्थन गर्दै रवीन्द्रले लेखेको लेख ट्वीट गदै बाबुरामले भनेका छन्–‘हामीलाई फेरि अर्को महेन्द्र चाहियो ? वाह !’
बाबुरामले सामाजिक सञ्जालमार्फत् रवीन्द्रप्रति तीतो पोखे पनि उनका अधिकांश ट्वीटर फलोअर्सले उनीतिरै बन्दुक उल्ट्याएका छन् । पोख्रेल बन्धु नामका एक ट्वीटेले बाबुरामको सत्तोसराप गर्दै लेखेका छन्–‘बाबुरामजस्तो बुद्धिभ्रष्ट हुनुभन्दा त महेन्द्र हुनु कैयौं गुणा जाती ।’
बाबुरामले रवीन्द्रप्रति कटाक्ष गर्दै थालेको बहसमा धेरै सहभागी भएपनि अधिकांश बाबुराममाथि नै खनिएका छन् । यसलाई कतिपयले बाबुराम र रवीन्द्रको लोकप्रियताको मापनकारुपमा समेत विश्लेषण गरेका छन् ।
अधिकांशले रवीन्द्रप्रति बाबुरामले गरेको कटाक्ष मन नपराएको भएपनि छोरी मानुषि यमी भट्टराई भने बाबुको समर्थनमा उत्रिएकी छिन् । उनले बाबुको बचाउमा लेखेकी छिन्–‘राम्रो लेखन तर पढ्दै जाँदा लाष्टमा ‘पञ्च’ गुण त ‘पञ्चे’ गुण पो हो भन्ने आयो त !’
घट्दै बाबुरामप्रतिको अरुचि
केही वर्ष अघिसम्म सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको आकर्षण थेगिनसक्नु थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्न भूमिका खेलेका केही फ्याक्टर मध्येको एक सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता पनि थियो । बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सामाजिक सञ्जालमा स्वतःस्फुर्त अभियान नै चलाइएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय बाबुरामको यो ग्राफ ह्वात्तै घटेको छ । पार्टीमा बाबुरामले जसरी आफ्ना समर्थक जोगाउन सकेका छैनन्, सामाजिक सञ्जालमा हिजो उनको समर्थनमा लेख्नेहरु नै उनीप्रति खनिन थालेका छन् । यसले बाबुराम सामाजिक सञ्जालमा अलोकप्रिय बन्दै गएको देखाउँछ ।
Previousतौल घटाउनुछ ? जाडोमा पनि चिसै पानीले नुहाउनुस्
Nextबीबीसीको उत्प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सांसद उमादेवी वादी
५ लाखभन्दा बढी मुल्यका मोबाइल बरामद